2019-12-26 NgoDisemba 24, 2019, i-Hebei Xueruisha Group ihlangene ne-Hebei Hongan Law Firm ukusiza abampofu futhi baya eShanggeer Village, eQuyang County, ukuyonikela ngaphezu kwama-80,000 yuan ebusika phansi amajakhethi, ilayisi namafutha. ...
Inkampani yaseXiong'an New Xue Ruisha Group Company "Ingqungquthela Yokuqalisa Ukuvusa iSherisa"
Umbhali: Li Ying Ngokuphela kweholide loMkhosi Wentwasahlobo, inkampani isiqalile uhambo lonyaka omusha! Isiqalo esihle siyingxenye yempi. NgoMashi 5, 2018, iXueruisha Group Company eXiong'an New District ibambe usihlalo weqembu ...
Ukusuka “ekuzuzeni” kuya kusomabhizinisi, uLiu Jianhong weXueruisha Group uyindoda enendaba
2017-08-28 Ukubekezela nokuphishekela amaphayona Le ndoda enendaba. Ngokuphikelela okuqinile, umoya ongapheli, nokuphishekela okunenkani, umgwaqo ongaphansi kwezinyawo zakhe uhlala ugcwele ithemba, futhi welulela phambili ngokuxhuma nemikhawulo ... A ...